IComrades Marathon izohlanganisa izitha eNtshangwe - Bayede News
Usolwa ngenyambadu u-ANC uqukula izinsiza eNquthu
Bakhohlwa imibango yezepolitiki esidlule nemiphefumulo kwashiswa nemizi uma sebekhomoza abagijimi
INDAWO yaseNtshangwe, eseMpumalanga yeTheku, KwaZulu-Natal ibe sematheni ngenxa yokuphalala kwegazi obekudalwa ukungaboni ngaso linye phakathi kwamalungu eNational African Congress (ANC) neSouth African Communist Party (SACP). Le ndawo ihlaselwa ilo mshophi nje, kuningi okuhle empeleni edume ngakho. Ngaphandle kokukhiqiza abaholi bezinga eliphezulu abafana noMnu uJames Nxumalo obeyiMeya yeTheku kanye nabaholi abafana noBoy Shozi kodwa igama elithi iNtshangwe iningi lilimatanisa neComrades Marathon okungumjaho ohamba phambili emhlabeni jikelele. Phela igama elithi Inchanga lingena ezindaweni ezinhlanu ezibizwa ngeBig 5 okuchazwa ngazo umzila walo mjaho okuzothi kulo nyaka wenyuke njengoba uzobe usuka eCity Hall, eThekwini uze uphelele eScottville Racecourse, eMgungundlovu.
Kulokhu kuchazwa komzila okukhona kuwo iCowies Hill, iFields Hill neBothas Hill, iNtshangwe ingenye yesigaba somzila weComrades Marathon esihlonishwa njengesePolly Shortts ngenxa yokwenyukela nokuba nenqwaba yamajika. Uma ukhuluma nabagijimi beComrades Marathon bakutshela kahle ukuthi usuke sewusebenzile uma ukwazile ukwedlula kulo mmango waseNtshangwe, ikakhulukazi uma kusukwa eThekwini kozophelela eMgungundlovu. Yisona kanye lesi sizathu esidala ukuthi minyaka yonke kuphume nesinedolo sakule ndawo ukuzogqugquzela abasubathi abasuke bebonakala ukuthi bathwele kanzima.
Ngesikhathi elaboHlanga lihambele eNtshangwe lapho izakhamuzi zikhulume nalo zalibeka ngembaba elokuthi lo mjaho oyibanga lama-86.73km ufike kahle njengoba kwabaningi izibazi zingakapheli. UMnu uSibusiso Nyandeni (55) ongesinye sezakhamuzi esidala saseNtshangwe noqale ukusubatha lo mjaho kusukela ngowe-1978, ubikele iBAYEDE ukuthi kadeni lo mjaho uqale ukuhlanganisa abalandeli bezinhlangano ezahlukene odlameni lokuqala olwenzeka ngeminyaka yama-80 olwaluphakathi kwe-Inkatha Freedon Party (IFP) nayo i-African National Congress. UNyandeni ozokuba eyingxenye yalo mjaho walo nyaka udalule ukuthi ngeminyaka yama-80 ungomunye wabahlukumezeka kakhulu njengoba ashiselwa nomuzi.
Uqhuba uthi phezu kokuba kwakunalokhu kubhekana ngeziqu zamehlo kodwa uma kuneComrades Marathon ayekuqaphela ukuthi uma sekwedlulwa ngaseNtshangwe kwakuhlangana abalandeli bezinhlangano ezahlukene bezogqugquzela abasubathi. Lo msubathi weGGA Athletics Club uthi ubufakazi balokhu yingonyaka owedlule kade kunalo mjaho. Uthi ngesikhathi edlula eNtshangwe ngezithuba zehora lesi-8 ekuseni waqhamuka elindwe yizakhamuzi zakule ndawo eziningi ezazizomeseka. Uthi ezinye zamncoma ngokuthi uyindoda emadodeni, izakhamuzi zazizitshela ukuthi uyoze edlule eNtshangwe ngehora lesihlanu ntambama.
“Nyakenye ngedlula ngaseNtshangwe vele sekuqalile ukungaboni ngaso linye phakathi kwe-ANC neSACP. Kodwa engakubona ukuthi kwabakhona abalandeli bezinhlangano ezahlukene, kukhona nezazivela eHillcrest naseMbo. Nakulokhu nginethemba ukuthi lo mjaho ozokwazi ukuthoba amanxeba alabo abashiywa yizihlobo zabo ngenxa yodlame lezombusazwe. Impela iComrades Marathon eNtshangwe ifike ngesikhathi esihle,” kugcizelela uNyandeni nyakenye ohlabane ngendondo yeBill Rowan ngenxa yokwenza isikhathi esingamahora ayisi-8:45:35. Lo msubathi oveze ukuthi wayegijima nomakadebebona okungoWillie Mtolo, uThomson Magawane, uWillie Mavuma, ukusho abambalwa uthi, kulokhu uzimisele ngokunqoba isiliva.
USiboniso Sibiya ofakane umlomo naleli phephandaba efake isikibha seSACP uthe ufisa ukuba sengathi usuku lwangesonto selufikile. Uveze ukuthi nakuba wayeseyingane ngeminyaka yama-80 kusenodlame lokuqala, kodwa akukhumbulayo ukuthi uma kuneComrades Marathon kwakuhlangana ndawonye abantu abaningi. Uthi uthole esemdala ukuthi babehlukene ngokwezinhlangano. USotobe uthi uma ngempela kuyiqiniso ukuthi laba bantu ababeqguqguzela abagijimi bebephuma emaqenjini ehlukene nakulokhu ubona iComrades izolibamba iqhaza ekuhlanganiseni abantu bakule ndawo.
USiphelele Dlamini wakhona kule ndawo uthe ngokwakhe kusukela kudala iComrades Marathon yayihlanganisa abantu ngoba vele iNtshangwe inomlando omuhle ngeComrades. Uveze ukuthi esinye sezizathu esidala ukuthi kuphume nesinedolo ukuyogqugquzela abasubathikuthi vele le ndawo inesibalo esiningi sabagijimi abangenela lo mjaho.
Okunye ngeComrades 2017
Kulo nyaka lo mjaho uzongenelwa ngabasubathi abayizi-21 433.
Kulesi sibalo abaseNingizimu Afrika bayizi-19 586.
Abasubathi besifazane bayizi-4 608.
Abesilisa bayizi-16 825
Abaphuma ngaphandle kwelakuleli kodwa abangabase-Afrika bangama-443.
Abaphuma ngaphandle kwezwekazi lase-Afrika bayi-1 408.
Abaqala ukungenela lo mjaho bayizi-6 588.
Abazobe bewugijima ihlandla le-10 bangama-491.
Abazobe bewugijima ihlandla lama-20 bayi-110.
Abazobe begijima lo mjaho ihlandla lama-30 bangama-21.
Ozoshaya intambo uzoklonyeliswa ngezi-R425 000.
Owakuleli ozoshaya intambo kubona bobubili ubulili uzophinde athole ezingama-R200 000.
OwaKwaZulu-Natal ozoba ngowokuqala ukuqeda uzoklonyeliswa ngezingama-R35 000.
ESt Johns Avenue Subway kumele abasubathi bedlule ngehora lesi-8h10 sebegijime isikhathi esingama-2:40:00.
EWiston Park kumele bedlule khona ngele 10h00 sebegijime isikhathi esingama-4:30:00.
EDrummond kumele bedlule ngele-11h40 sebegijime isikhathi esingama-6:10:00.
KuN3 Subway kumele bedlule ngele-13h40 sebegijime isikhathi esingama-8:10:00.
E-Umlaas Road Interchange kumele bedlule ngele-15h00 sebegijime isikhathi esiyi-9:30:00
ETop of Polly Shortts kumele bafike ngelesi-16h40 ukuze bezokwazi ukwenza isikhathi esiyi-11:10:00
Ami kanje amarekhodi
Kwabesilisa, uma kwenyukwa irekhodi lesikhathi esingamahora ayisi-5:24:49 liphethwe nguLeonid Shvetsov waseRussia, ulenze ngowezi-2008.
Kwabesifazane, irekhodi lesikhathi samahora ayisi-6:09:24 liphethwe ngu-Elena Nurgalieva wakhona eRussia, ulenze ngowezi-2006.
Bayede News Jun 2, 2017